Etu ị ga - esi nyocha nyocha tupu ị were ego
Bad hires bụ ọ bụla azụmaahịa kachasị njọ nro.
Ọ bụghị naanị na ha na-emebi akụ nke ụlọ ọrụ, kamakwa ọ na-etinye nchekwa nke ndị ọrụ na ndị ahịa n'ihe egwu.
borrowgbaziri okwu ochie, "apụl ọjọọ na-emebi ihe niile".
O di nwute, apụl ọjọọ a gbanahụ nyocha nke ọtụtụ ndị ọkachamara na-ewe ndị ọrụ site na ịgha ụgha na ha malitegharịa. Azọ kachasị mma isi wepu ndị ọjọọ a bụ ime nyocha nke ga-agagharị na akụkọ ntolite nke onye ọ bụla dịka ezigbo ihe.
Ihe Mfe Dị Mfe nke Nnyocha Nlekọta
don'tkwesighi ịpụ apụ niile mgbe ị na-eme nyocha ndabere.
Ọ bụrụ na ị na-enyocha ndị ga-abanye n'ọkwa ọkwa, ịkwesighi ime nyocha nyocha niile n'ihu. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ mbụN'ime usoro nhọrọ iji nyochaa ọtụtụ ndị na-achọ akwụkwọ, ịkwụ ụgwọ maka akụkọ zuru oke nwere ike ọgaghị aba ma ọlị.
N’ọnọdụ abụọ ahụ, nyocha njirimara dị mfe zuru ezu. N'adịghị ka akụkọ ndị ọzọ dị mgbagwoju anya, nyocha njirimara nwere ike ịnye nsonaazụ nyocha ndabere n'otu ntabi anya ma ọ bụ n'ime otu ụbọchị. Ihe ị chọrọ bụ aha onye na-arịọ arịrịọ, nọmba nchekwa mmekọrịta mmadụ na ụbọchị ọmụmụ ya na onye na-eweta ndị ọzọ nwere ike weghachitere gị nsonaazụ bara uru. . Nlekọta ndabere nke ntọala ọ na-enye nghọta banyere ọrụ, agụmakwụkwọ, ndekọ mpụ, alụmdi na nwunye, yana ikpe ọ bụla, enweghị ego ma ọ bụ ikike ndị metụtara aha ya.
Akụkọ pere mpe mana zuru oke iji belata ndị ga-azọ gị tupu ịgafe na akụkọts zuru ezu ma ọ na-ewe oge.
Akụkụ siri ike nke nlele ndabere
isi ndabere na-ekpuchi iwu gọọmentị etiti, steeti, na mpaghara nke na-agabiga.
Ọ na-akawanye njọ mgbe ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ gafee ebe a na-etinye iwu n'ụzọ dị iche. Dịka ọmụmaatụ, ebe otu steeti machibidoro ịnweta ụfọdụ ndekọ omempụ, steeti ọzọ na-amachi mgbe na otu esi enweta ndekọ ndị ahụ. site na mmalite. Enwere ike ịmepụta usoro ntuziaka a site na enyemaka nke onye ndụmọdụ ụlọ na ụlọ iji hụ na nkwekọ na omume nyocha nke ndabere, na-eme ka nrube isi na iwu ndị dị ugbu a.
Ọ bụrụ na ị na-enyocha ndị na-achọ ihe karịrị otu steeti, e nwekwara ndị na-eweta ọrụ tNdabere nyocha dị ka GoodHire nke nwere ike ịme ka usoro ahụ dị mfe. GoodHire nwere arụ ọrụ arụ ọrụ na-adịghị mma, nke pụtara na ọ nwere ike ịchọpụta ọnọdụ azụmaahịa na ọnọdụ nke onye na-arịọ ya na-akpaghị aka. Dabere na ozi a, ọ na - achọpụta iwu ndị na - achịkọta onwe ha ma mezie iwu siri ike karị nke metụtara ọchịchị niile.
Nzọụkwụ 1: Mepụta usoro nlele ndabere
Nkwenye ndabere na-enweghị isi na-eme ka azụmahịa ọ bụla bụrụ ndọta maka ikpe. Usoro nyocha ederede ederede ederede na-egbochi nke a ime n'ihi na ọ na-eme ka mmadụ niile nọrọ n'otu ibe.
Site na usoro ntuziaka doro anya, ndị na-eme mkpebi ga-adaba n'ụdị ụdị nyocha ndabere iji mee, maka onye ọ ga-eme na otus nsonaazụ ga-atụgharịrị.
Kpebie ụdị nyocha akwụkwọ ndabere iji rụọ
nyocha ọrụ tupu abịa n'ọtụtụ ụdị. Dabere na oke na ọdịdị azụmaahịa gị, ịnwere ike ịme ego niile ma ọ bụ ụfọdụ n'ime ego ndị a.
ofdị nyocha ndabere ị ga-emejuputa ga-adịgasị iche site na ọnọdụ. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịchọrọ ego nyocha maka ọnọdụ ndị chọrọ nghọta ego, ebe ị na-elele ndekọ ndekọ na-ahụta na-enweghị isi maka ndị ọrụ ga-ebugharị ụgbọ ala ụlọ ọrụ.
Mgbe ị na-ede ụkpụrụ nyocha ndabere, kọwaa nke a ga-eme ndị na-eme ihe ngosi, na ndị ga-eme ya. Nke a bụ nchịkọta nke ụdị nyocha dị iche iche iji malite ịmalite:
- nke gụnyere ịlelendaba nke nọmba nchekwa nke onye nyocha na nyocha ihe niile metụtara ya. Nke a gụnyere aha, utu aha, ụbọchị ọmụmụ na adreesị.
- na-agagharị na ọdụ data iji chọpụta ma onye a mara ikpe mpụ ma ọ bụ mmejọ na ọkwa gọọmentị etiti, steeti na ngalaba. Njide njide nwere ike ịkpata nkwenye ma ọ bụ mgbasa, mana ọ dabere na steeti gị nke enwere ike ịgụnye na akụkọ gị. Dịka ọmụmaatụ na California, ịnweghị ike inyocha ihe ndekọ njide ọ gwụla ma ha kpatara ikpe ikpe. Nyocha nke ndị omekome gụnyekwara nyocha nke ọtụtụ ndị na-emejọ nwoke na nwanyị na ndị omekome na United States.
Nyocha nke Courtlọikpe Obodo
- na-egosipụta ikpe ọ bụla na-abụghị ndị omekome nke ndị sonyere na ya. Enwere ike ịtụ yaomume mgbochi, mmebi iwu obodo ma ọ bụ obere ebubo gọọmentị etiti debara aha ha. na mpaghara ụlọ ikpe obodo.
Ebe E Si Nweta Akụkọ Nyochaa
- bụ iwu akwadoro tupu ọrụ maka ndị na-enyocha akwụkwọ na-achọ ọrụ na ụlọ ọrụ ego. Accountza ajụjụ ego bụ ihe dị mkpa iji jikwaa akụ nke ndị ọzọ, nke na-eme ụdị nzụlite a ka ọ bụrụ ụzọ a pụrụ ịdabere na ya iji nyochaa ndị na-enyocha akwụkwọ maka ọrụ ego ma ọ bụ maka ọnọdụ na ụlọ akụ ma ọ bụ na-ere ahịa. Ndekọ akụkọ banyere kredit na-anakọta ozi gbasara enweghị ego, mkpokọta ego a na-akwụghị ụgwọ, ụtụ isi na akụkọ ịkwụ ụgwọ metụtara aha onye na-arịọ arịrịọ.
Akuko Mbugharị Motorgbọala
: Na-enye ozi gbasara ikike ịkwọ ụgbọala nke onye ndoro-ndoro. Inyocha ihe ndekọ akwọ ụgbọala na-egosi izi ezi nke ikike ịnya ụgbọ alanke nwa akwukwo. Ọ na-ekwukwa mmebi iwu ọ bụla na nkwụsịtụ nke okporo ụzọ, na-enye ndị were mmadụ n'ọrụ nkọwa doro anya nke omume onye ahụ n'okporo ụzọ. Ọ bụ nyocha nke ndị ọrụ ga-ebu ụzọ ga-eburu gị ọrụ ga-ebugharị ụgbọ ala ndị nwe ụlọ ọrụ maka ebumnuche azụmahịa.
- bụ ụzọ izizi nke agbachitere megide ndị na-achọ akwụkwọ na-achọkarị mmalite ha ma ọ bụ hapụ ozi dị oke mkpa iji metụta mkpebi ndị ọrụ ha. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, nke a bụ nyocha ndabere nke na-eme ka ndị na-achọ ọrụ nwee ahụmịhe ma tozuru oke maka ọrụ ahụ dịka ha na-azọrọ. Iji lelee akụkọ ihe mere eme nke onye a na-arụ ọrụ, ndị ọkachamara na-ahụ maka ọrụ mmadụ na-akpọtụrụ ndị were gị n'ọrụ n'oge gara aga ka ha jụọ ha maka aha ọrụ onye a na-achọ ọrụ, ụbọchị ọrụ, ọrụ ndị a rụrụ na mgbasa.ọnọdụ gbara ọpụpụ onye ahụ n'ọrụ.
: Na-ebelata ihe ize ndụ nke ịgha ụgha, ọkachasị maka ọnọdụ nchịkwa chọrọ ogo dị elu. Nke a na-eme ka o doo anya na nwa akwukwo ahụ gara ụlọ akwụkwọ ziri ezi wee nweta ogo ogo egosiri na mmalite ahụ. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịme nyocha nlekọta ahụike iji lelee nzụlite ọkachamara ahụike. Onye nwere ogologo ịdọ aka na ntị, nkwụsịtụ ma ọ bụ ntaramahụhụ nwere ike ọ gaghị akpachapụrụ ya anya na-akpaghị aka, mana ha na-enye nghọta maka ọkachamara ọkachamara.
Ọ bụrụ na onye nyocha ahụ dabere na United States mana ọ gụọla akwụkwọ mbụ, rụọ ọrụ ma ọ bụ biri mba ọzọ, enwere ego makas track track ụwa iji weghara nkọwa ndị dị mkpa a gaara echefu.
Kpebie nke a ga-enyocha nyocha maka ụdị ọ bụla nke ndị na-enyocha
Ọ bụghị ndị niile na-enyocha akwụkwọ kwesịrị ịgafe otu usoro nyocha nke ndabere. Emechakwa, ndị ọrụ nwere ọkwa dị iche iche. Do naghị amanye onye ọ bụla itinye akwụkwọ maka ọkwa ntinye site na otu usoro nhọpụta siri ike nke ndị na-achọ maka ọnọdụ ndu na-enweta.
Ya mere, ọ dị oke mkpa ịkọwapụta n'usoro nyocha nyocha ọ bụghị naanị ụdị ụdị nyocha ndị a ga-arụ tupu ọrụ, kamakwa maka onye. Otu ụzọ iji mezuo nke a bụ na
Dịka ọmụmaatụ, Atiya 1 dị na ala nke ndị isi ma yabụ nwere ike ịgụnye ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ọrụ ngo na-enweghị usoro azụmahịa nke ụlọ ọrụ ahụ. Ndị ọrụ nhichadabara n'ụdị a ma nwee ike goro ya ma ọ gwụchaa site na njirimara na nyocha nke mpụ. nwee ike ịnweta usoro ọrụ. Ya mere, ha kwesịrị ịgafe nyocha akwụkwọ na akụkọ ụgbọ ala na mgbakwunye na nyocha ndabere.
Ndị ọrụ otu 3 bụ ndị nọ n'ọkwa dị elu n'ihi na ha nwere ohere ịnweta akụrụngwa na ozi ụlọ ọrụ dị oke mkpa. Ha gụnyere ndị nyocha nke ime obodo, ndị isi ngalaba na ndị isi njikwa. Inyekwu ọrụ pụtara ịchịkwa ike. Yabụ, na mgbakwunye nyocha nyocha achọrọ maka edemede abụọ gara aga, ndị otu Atiya 3 ga-edobekwa nyocha ọrụ ọzọ.uche na zuru ezu.
Gwa onye ọka iwu iji hụ na nrube isi na iwu ọrụ
Ide ederede dị mkpa site na isi na-enweghị ndụmọdụ nke onye ọka iwu ma ọ bụ ngalaba ọrụ obodo bụ ikpe na-echere. Nke a bụ n'ihi na gọọmentị etiti, steeti, na mpaghara mpaghara na-enyocha nyocha ndabere, yana ịghara ịgbaso nke ọ bụla n'ime ha nwere ike ibute ịgba akwụkwọ ịgba ogologo na oke ọnụ.
Ihe gbagwojuru anya maka ndị were ọtụtụ steeti ga-emekọrịta ọtụtụ iwu na-achịkwa ọtụtụ ọchịchị. Site n'enyemaka nke onye ọka iwu, ụlọ ọrụ na ndị na-ewe ndị ọrụ n'ọrụ nwere ike ịchọpụta ebe iwu ndị a jikọtara ọnụ wee chọpụta otu esi aga n'ihu n'emebighị ihe ọ bụla. tinye. Na
Na nchịkọta, nke a bụ otu ndụmọdụ ndụmọdụ gbasara iwu nwere ike isi hụ na amụma nlele nzụlite gị na-agbaso iwu na usoro:
Schetọ oge maka nlele ndabere.ction - Iwu dị na igbe ahụ na-amachibido ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị na - ewe ndị ọrụ n’agbụ ajụjụ banyere omekome onye omekome mgbe ị na - achọ ọrụ mbụ. Ọ bụrụ na ịnọ na steeti, obodo, ma ọ bụ obodo ebe iwu ban-igbe na-arụ ọrụ nke ọma, ị gaghị enwe ike nyocha nyocha rue mgbe emere ọrụ ịhazi ọnọdụ. Agbanyeghị, enwere ike itinye akwụkwọ dabere na azụmaahịa ya yana ebe ya. Dịka ọmụmaatụ, na Washington D.C., iwu mmachibido iwu na-emetụta naanị ụlọ ọrụ nwere opekata mpe ndị ọrụ 15 na-arụ ọrụ na mpaghara ahụ.
Usoro nyocha usoro.
Creditkpụrụ Nkọwapụta Ego Mara Mma (FCRA) eguzobewo ụkpụrụ nduzi iji jide n'aka na onye nyocha ahụ maara nyocha ndabere site na mmalite ruo na njedebe. FCRA chọrọ ndị were gị n'ọrụ ka ha nye ndị na-achọ akwụkwọ akwụkwọ nkwenye na-agwa ha na nkwenyeotu nzụlite ga-arụ maka ebumnuche ọrụ. Ọ bụrụ na nsonaazụ nyocha nke ndabere dugara onye were gị n'ọrụ ịjụ ngwa nwa akwukwo ahụ, FCRA chọkwara onye were ya n'ọrụ ịgbaso usoro mmeghachi omume mmekpa ahụ atọ. Usoro a gụnyere izipu onye na-arịọ arịrịọ otu akwụkwọ akụkọ dị mkpa, mgbe ị na-eche ka onye anamachọ ahụ zaghachi ma ọ bụ ịrịọ arịrịọ, tupu emesịa zipu ọkwa na-adịghị mma nke ịrịọ arịrịọ.
Ekwesịrị iji ihe ndekọ ndị omempụ maka nyocha ndabere. Dịka ọmụmaatụ, FCRA na-ekwu na nyocha akụkọ banyere kredit kwesịrị ịchịkwa enweghị ego mgbe afọ 10 gachara ma kwụọ ụgwọ ụtụ isi mgbe afọ asaa gasịrị, n'etiti ndị ọzọ. Commissionlọ Ọrụ Maka Ohere Nha nha anya (EEOC) na-etinyekwa Aha VII nke Civil Rights Act of 1964, nke na-egbochi nnabata ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ ịme mkpebi na-adabere na mpụ mmadụ. ndekọ. Kpa oke nwere ike inye gị nnukwu nsogbu, yabụ zere ịdabere na ndekọ ndị omempụ na-enweghị ihe jikọrọ ya na ọnọdụ onye ahụ na-arịọ arịrịọ. Ndị ụlọ ọrụ kwesịkwara ịtụle ọdịdị nke mmebi iwu na oge agafeela kemgbe onye nyocha ahụ mechara nga ha.
Dị ka a ga - asị na iwu gọọmentị agbachapụtaghị oke, enwere ụfọdụ iwu steeti na - ejikọ ha ọnụ yana ekwesịrị ịtụle ya mgbe ị na - ede iwu nyocha ndabere.
Dịka ọmụmaatụ, ọtụtụ steeti amachieala iji mkpesa kredit dịka nyocha tupu ọrụ. N’ebe amachibidoro ha naanị, enwere ike iji akụkọ gbasara kredit kwalite usoro nyocha.ndị na-aga ime ụlọ akụ na ụlọ ọrụ ego ndị ọzọ.
Nzọụkwụ 2: Họrọ Companylọ Ọrụ Na-enyocha Ihe Nleba Anya
Na-ekpebi ime nyocha nke onwe gị dị ka maze nke ụlọ ọrụ ndị na-azụghị ọzụzụ ga-apụ apụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịme nyocha ndabere, ọbụlagodi ịnweta ndekọ mpụ n'ụlọ ikpe nwere ike iwe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndụ gị niile. N'ihi ya, ndị nwere ike ịpụta aha ha ga-akwụsị inwe ndidi kama itinye aka na ndị na-asọ mpi.
Federal, steeti, na iwu mpaghara na-achịkwa nyocha ndabere. Yabụ, belụsọ ma ịnwere ndụmọdụ gbasara ụlọ n'ụlọ 24/7, ịgba akwụkwọ na-abụkarị mmejọ.
N'ụzọ dị mma, enwere ndị na-ere ahịa nke atọ nwere ike inyere ụlọ ọrụ na ndị na-ewe ndị ọrụ n'ọrụ aka wepu echiche ha n'ọrụndabere ego.
Ọ bụrụ na ị nweelarị usoro nyocha ndabere ebe, usoro ọzọ bụ ịchọta ndị na-ere ahịa nke atọ na-enyocha igbe gị niile. Ọ bụrụ n ’ị nwere nnukwu ego iku, dịka ọmụmaatụ, enwere ụlọ ọrụ dịka Intelius nke ga-egbo mkpa gị. Site na ịkwụ ụgwọ ego kwa ọnwa, Intelius nwere ike iwepụta akụkọ na-akparaghị okè na ndị na-aga ime gị, gụnyere aha ha, aha aha, nkọwa kọntaktị, agụmakwụkwọ, akụkọ ọrụ, na ndekọ mpụ, n'etiti ndị ọzọ
Intelius nwere ike ịmepụta akụkọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo, yabụ na nke a bụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ị na-achọ nyocha ndabere ndabere. Ozugbo ị dị njikere maka akụkọ miri emi karị, ị nwere ike ilekwasị anya na onye na-eweta kachasị mma dabere na njirimara abụọ kachasị mkpa nke a ga-atụle n'okpuru.
Họrọ ụlọ ọrụ na-enyocha ndabere na confoIntegrated FCRA rmity
Fairkpụrụ Iwu E Si Nweta Kredit (FCRA) dị ka ị ghara ịgabiga okè nke nlele ndabere. Ọ na-ekpebi mgbe ị ga-eme nyocha ego ma gbochie ihe ndekọ ị nwere ike iji wee mee ka ndị na-eme mpụ mejọrọ.
Nsogbu bụ na steeti dị iche iche na obodo dị iche iche na-agbaso ụkpụrụ FCRA n'ụzọ dị iche. N'ihi nke a, ndị were gị n'ọrụ ndị were ego n'ọtụtụ ebe nwere ike isiri ya ike ịnyagharịa akụkụ iwu nke nyocha ndabere.
Otu ụlọ ọrụ FCRA na-agbaso usoro nyocha ndabere na-ebuli ihe niile dị arọ ka ụlọ ọrụ wee nwee ike ịgba ụgwọ kacha elu na-enweghị nchegbu gbasara nnabata. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ị na-emeso na-azọrọ na ha kwenyere na FCRA, jụọ maka akwụkwọ nwere ike igosipụta ya.
Azụmahịa dị mma bụ azụmaahịa na-enye nyochaiche iche ka onye obula choro inweta ohere nha iji gosiputa nka ha. O nwekwara arụ ọrụ arụnyere na ị ga-enweta otu ọkwa mgbe onye jụrụ ajụ jụrụ ozi ọhụụ, yana onye ọzọ mgbe enyere ọkwa ọjọọ ikpeazụ.
Rịba ama oge nyocha oge ị ga-eme
Ọsọ ọsọ nke onye na-eweta ndị ọzọ na-eweta nsonaazụ nyocha ndabere ga-adịgasị iche dabere n'ụdị ndekọ ị na-arịọ.
Enwere ike ịmechaa ndenye ego dị na ntabi anya, ebe ọrụ, ọzụzụ na ịnye ikikere nwere ike were otu izu. Ihe ndekọ omempụ na mpaghara ebe nchekwa data adịghị enyocha kamakwa ọ na-akwụsịlata usoro ahụ, yabụ jide n'aka na onye na-eweta ya na-edozi usoro iheomume dị mma mgbe ọ na-eme nyocha ndabere.
Gụnyere lOge mkpirisi dị mkpumkpu ka mma, maka na ịchọghị ida nnukwu talent n'ihi igbu oge.
Agbanyeghị, gbaa mbọ hụ na azụmaahịa anaghị eweta nsonaazụ ọsọ ọsọ na ọnụ ahịa data sitere na mma. Ọ na-adịkarị ụfọdụ ndị na-enye nyocha iji ụzọ mkpirisi na aha ịmekwu uru na obere oge.
Gbalịa hụ na ị na-arụsi ọrụ ike gị mgbe ị na-ahọrọ ụlọ ọrụ nyocha ụlọ ọrụ na-adabere na oge ngwangwa ngwa ngwa. Iji sistemụ na-akpaghị aka wepụ data site na ọdụ data ndị omempụ na-abụkarị ọkọlọtọ na-acha ọbara ọbara, ọ gwụla ma onye na-ere ahịa nwere ike igosi na data ahụ bụ ihe arụ ọrụ nke ihe ọ ga-enweta.
Anotherzọ ọzọ maka ndị na-eweta iji wepụta ụzọ mkpirisi bụ ịchọ naanị aha onye rịọrọ ma leghara aha ọ bụla ọzọ ha chọpụtara anyae iji chekwaa oge. Họrọ ụlọ ọrụ nwere teknụzụ na-eme nyocha miri emi iji mata aha dị iche iche metụtara mmadụ, ọkachasị ndị gbanwere aha ha site na alụmdi na nwunye ma ọ bụ site na usoro obodo.
N’ikpeazụ, tụlee otu ụlọ ọrụ ahụ si enweta ihe ndekọ ahụ. Enwere ụlọ ọrụ nyocha nke na-enyefe ọrụ ndị ahụ gaa na ebe nhazi azụmahịa na India na Philippines iji chekwaa ụgwọ ọrụ. Ọ bụghị naanị na ha na-eme data ndoro-ndoro ohi na-ezu ohi njirimara, kamakwa tinye aha ụlọ ọrụ n'ihe egwu site na ịhapụ ndị ọrụ a zụrụ azụ iji aka ha nweta faịlụ ụlọ ikpe.
Nzọụkwụ 3: Kwadebe nwa akwukwo maka nyocha ọrụ tupu oge a
N'usoro iwu FCRA, ị nweghị ike ịme nyocha nyocha na-enweghị nkwenye nke onye ahụna. Usoro a ga-egbu oge ruo mgbe ọrụ inye ọnọdụ ga-eme iji hụ na enweghị ajọ mbunobi megide ndị a marala ikpe mpụ.
Ihe ndị a dị mkpa iji gosipụta nghọta, na-eme ka akụkụ abụọ ahụ ghara itinye aka na ikpe mgbe ihe anaghị arụ ọrụ na njedebe.
Gwa onye na-achọ akwụkwọ maka nyocha nke mbido nso a
Nke a bụ ọkwa bara uru n'ụzọ abụọ. Ọ bụrụ na nwa akwukwo ahụ ajụ ịnwale ule tupu ọrụ, nke ahụ pụtara otu obere nsogbu ịnagide. Ọ bụrụ na onye na-arịọ ya kwetara, nke a nwere ike inye ha oge iji chọpụta ma mezie ihe ndị ahụ na-ezighi ezi. Ọ ga - enyere ya aka ịkwadebe ịkpọ oku dabara adaba ọ bụrụ na resultats ga-egosi adịghị mma.
Iji nweta nkwenye nke onye nyocha ahụ, onye na-eweta nyocha ndabere ga-enyerịrị onye na-arịọ arịrịọ abụọ: ụdị sitere na
Equlọ Ọrụ Ikike Nhata (EEOC) na-atụ aro gụnyere n'ụdị
Iji kwenye na nyocha ndabere, onye nyocha ahụ kwesịrị ịghọta nke ọma ihe edere na ụdị nke
Na mgbakwunye na ụdị abụọ ahụ a kpọtụrụ aha, onye nyocha ahụ kwesịrị ịnata otu Federal Trade Commission (FTC) ) akwukwo akpọrọ "Nchịkọta nke ikike gị n'okpuru Iwu Nkwupụta Ego Mara Mma". Akwụkwọ a na-eme ka o doo anya na onye nyocha ahụ maara na FCRA na-echebe ikike ha yana na onye were ya n'ọrụ ga-enyocha nyocha ndabere na-emebighị ikike ndị a.
Mee ka ọnọdụ gị were dị mfe ma ọ bụrụ na ị ga-ewe gị n'ọrụ
omume kacha mma. Nke a bụ eziokwu ọkachasị ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ na-akwụ ụgwọ na steeti ebe iwu na-amachi igbe ahụ na-agbanye.
Banye igbe ahụ machibidoro ndị were gị n'ọrụ ịme nyocha tupu oge ọrụ n'oge a gbara ajụjụ ọnụ nke mbụ ma ọ bụ tupu ị nye ọrụ ọrụ. A na-etinye iwu a n'ọrụ ndị ọrụ were onwe ha na steeti ndị dị ka California, Connecticut, Hawaii, Colorado, Illinois, New Mexico, Vermont, Rhod e Island, na Washington.
Nzọụkwụ 4: Mee Nyochaa Nlekọta
N'ebe a na-achọpụta ego maka onye na-ere ihe na FCRA na-eburu gị nnukwu ibu. N'ụzọ dị iche, ịme nyocha nyocha ụlọ na-achọ ka ịnwere akụrụngwa nke gị iji rụọ ọrụ ahụ, yana ndị otu ọrụ aka iji lekọta usoro mmezi.
Dabere na ụdị data ị ga-achọ inweta, nyocha ndabereents nwere ike mechaa n'ime ụbọchị abụọ ruo ise. Dịka e kwuru na mbụ, ọ dị oke mkpa ịmekọrịta onye na-ere ahịa nke atọ nke na-ekwe nkwa oge mgbanwe ngwa ngwa na-enweghị ịchụ àjà nsonaazụ nsonaazụ.
Mee nyocha nke njirimara
Enwere ike ịme nyocha nyocha nke ọma n'otu ntabi anya, ma ọ bụrụhaala na ịnweta ozi nkeonwe onye nyocha ahụ.
Iji mee nyocha nke mbụ, ị ga-achọ aha onye ahụ, nọmba nchekwa ọha, ụbọchị ọmụmụ na adreesị afọ asaa gara aga. Adreesị dị mkpa ka ụlọ ọrụ nyocha ahụ ghara ịhapụ ikpe ọ bụla mpụ na-edebanye aha na steeti ndị ọzọ ma ọ bụ ogbè ndị ọzọ na-abụghị ebe obibi nke onye na-achọ akwụkwọ.
Ozugbo etinyere data ahụ na ntanetị nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ahụ, usoro ahụ ga-eweghachi nsonaazụ nke ga-ekpebi prohaine iji soro. Ọ bụrụ na ndị mbụ njirimara njirimara laghachi enyo pụta, i nwere ike ikpebi na ị gaghị aga na nzọụkwụ ọzọ ruo mgbe esemokwu ahụ edozi. Ma ọ bụghị ya, ịnwere ike ịme nyocha nyocha dị omimi.
Mee ihe nyocha ndị miri emi karị
Maka ọtụtụ ndị ọrụ, nyocha njirimara bụ naanị ihe mbụ. Iji wulite nkọwa zuru oke nke agwa mmadụ na akụkọ ntolite ya, ịkwesịrị ịme nyocha ndabere site na iji ọtụtụ ọdụ data.
Nke a bụ nnyocha nke ụfọdụ n'ime ọkọlọtọ mmiri nke ndabere elele na ihe na-etinyekarị na onye ọ bụla:
Criminal ndekọ ego
- agụnye a zuru ezu chọọ ọdụ data ndị omempụ na ọkwa gọọmentị etiti, nke steeti na nke ngalaba. Ndị na-ewe mmadụ n’ọrụ na-eche ihe ịma aka nke ịnweta ndekọ ihundị sitere na ọtụtụ ikike, mana ụlọ ọrụ nyocha nke ndabere nwere ike inye aka ziri ezi.
Ndị Akaụntụ Ndị Akaụntụ
- na-ekpughe ọrụ iwu metụtara ọrụ metụtara onye a na-achọ. Enweghị njikọ dị n'etiti ọrụ ndebanye aha nke ogbè dị iche iche, yabụ na-achọkwa enyemaka nke ndị na-eweta nyocha ndabere.
Ọrụ, agụmakwụkwọ na nyocha akwụkwọ ikike - a na-eme iji hụ na ndị na-achọ akwụkwọ bụ ndị ha na-azọrọ na ha bụ. Na ngụkọta, nyocha ndị a dị ezigbo mkpa. Ihe data achọrọ iji mezue nkwenye dị na ndekọ ọha, mana mmadụ nwere nnabata amamịghe nwere ike inweta ya.
Ebe E Si Nweta - gụnyere nyocha nke akụkọ kredit akwụmụgwọ. Agbanyeghị, amachibidoro data data na ọha na eze na kredit anaghị eme
Ihe ndekọ ụgbọ ala : Na-ezo aka na ndekọ ịkwọ ụgbọala nke enwere ike ịtọhapụ ya na onye na-enyocha ihe ndabere yana iwepụ aka. lelee nsonaazụ
Nsonaazụ nyocha nyocha nwere ike ịdị mma ma ọ bụ bụrụ nke na-adịghị mma maka nwa akwukwo ahụ. O doro anya, ọ dị mfe inye ndị na-achọ ọrụ ọrụ na-adịgide adịgide na-enweghị ikpe mpụ. Mana gịnị ma ọ bụrụ na nwa akwukwo tozuru etozu amaliteghị ncha? Site na iwu FCRA, iwu machibidoro igbe na Equal Employment Opportunity Commission na-amachibido ndị were gị n'ọrụ ịjụ ngwa dabere na mpụ mpụ gara aga, azịza ya adịghị mfe. Nyefee nsonaazụ nyocha ndabere na ọkwa ọkwa nke ọtụtụ
t gafee nzukọ ahụ, ihe karịrị otu ụzọ anya dị mma karịa otu. Site na itinye nsonaazụ nyocha ndabere na nyocha nke ọtụtụ ndị mere mkpebi, ewepụrụ mkpebi enweghị isi na foto a. Dịka ọmụmaatụ, mkpebi nke onye njikwa na-ewe ọrụ nwere ike nyochaa site na VP nke Ọrụ Ndị Ọrụ, VP nke Uru na Nnabata, ma ha abụọ. Nke a na-eme ka o doo anya na izi ezi na ụkpụrụ nke ịkwụwa aka ọtọ na-akwado yana na enweghị oke onyinye na-efu site na mkpebi aghara. N'ezie, enwere oge mgbe ị na-enweghị ike igosipụta otu ikpe ziri ezi. Ọ bụrụ na onye ahụ na-achọ ọrụ gọọmentị yana gọọmentị etiti gọọmentị kwuru hoo haa na ọ naghị emeghe onye ọ bụla a mara ikpe mpụ, mgbe ahụ ị ga-agbaso iwu ahụ. N'ọtụtụ oge, agbanyeghị, nnwale nke akụkụ atọ nwere ike ịba uru.
A makwaara dị ka "ihuenyo echere," ule ahụakụkụ atọ bụ ileba anya na ọdịdị ma ọ bụ oke njọ nke mpụ ahụ, ọnọdụ nke mpụ ahụ na ogologo oge ọ mere. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na e boro mmadụ ebubo na ọ nwere ikikere dị ka onye na-eto eto, ọ ga-adị mma inye ha ohere ọ bụrụhaala na ha nwere iru eru niile iji rụọ ọrụ ahụ. Mana ọbụlagodi na mpụ ahụ dị oke njọ iji gbochie ịtụle onye ọ bụla siri ike ịchọrọ maka ọrụ ahụ, Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) ka na-enye olileanya n'ụdị nyocha nke onye ọ bụla.
Inye Ntụle Onwe Onye Nye Ndị A Na-ajụ Ajụjụ
Nyocha nke onwe pụtara nanị inye ndị na-arịọ arịrịọ agọnahụ ohere iji gbapụta onwe ha. Dị ka ị maara, enwere ike ịnwe ezighi ezi na nsonaazụ nyocha na nyocha nke mmadụ iche nyere.onye na-arịọ arịrịọ oge zuru ezu iji dezie ndekọ ahụ.
Maka nyocha nke onwe onye ị ga-ewere ọnọdụ, ndị were gị n'ọrụ ga-agafe usoro usoro ihe ọjọọ atọ. Omume ojoo bụ usoro nke ndị were gị n'ọrụ ga-agbaso mgbe ị jụrụ azịza mgbe enwetara nsonaazụ backg. Companylọ ọrụ nyocha ahụ nwere ike ịrụ ọrụ mmejọ dị mkpa maka onye were gị n'ọrụ, mana onye were gị n'ọrụ ga-eme mkpebi ndị dị mkpa oge niile.
Ndị a bụ usoro atọ achọrọ iji hụ na onye nyocha ahụ natara nyocha nke onwe:
Nke mbụ, zigara onye na-arịọ arịrịọ akwụkwọ ozi mmekpa ahụ na-agwa onye ahụ mkpebi gị yana otu nsonaazụ nyocha ndabere metụtara nsonaazụ na-adịghị mma. Na mgbakwunye na ọkwa izizi nke ihe ọjọọ, ị ga-etinye otu nkendabere ego, ozi kọntaktị maka ndị na-ere ahịa nke atọ ndị mere nyocha ego, na otu akwụkwọ FTC "Nchịkọta nke Ikike Gị Iwu" akwụkwọ. FCRA. "
Nye oge zuru oke maka onye na-azọrọ maka ịhazi ihe ga-esi na ya pụta ka ha nwee ike itinye esemokwu ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ọ bụ ezie na oge ichere ọkọlọtọ bụ ụbọchị azụmahịa ise, ụfọdụ steeti nwere iwu mgbochi-igbe chọrọ ogologo oge. Gbaa mbọ hụ na ụlọ ọrụ nzụkọ ụlọ ọrụ gị na ya na-arụkọ ọrụ maara maka iwu ndị ahụ ka e wee nwee ike gbanwee usoro ihe arụ ọrụ akpaaka na ya. , ị nwere ike izipu ọkwa mmejọ ikpeazụ maka onye a na-achọ. veỌ bụrụ na akụkọ ihe mere eme na-ezighi ezi, zere iziga akwụkwọ ozi kachasị ọhụrụ.
Ọ bụrụ na ọnọdụ ahụ dị oke mkpa nye ụlọ ọrụ ahụ, hazie kọmitii mkpesa ka enwee ike ịme mkpebi ziri ezi. Nchịkọta a nwere ike ịgụnye ndị nnọchi anya site na iwu, ọrụ mmadụ, nchekwa na ngalaba ndị ọzọ elere anya dị mkpa na mkpebi ụlọ ọrụ niile.
Ọ bụrụ na imirikiti kwenyere, ịnwere ike ịmegharị ọrụ ahụ na-aga n'ihu ma belata ihe egwu nke mkpebi ahụ site na ịme nyocha nyocha.
2021-06-11 19:41:35 | Weebụsaịtị
2021-06-11 19:39:23 | Weebụsaịtị
2021-06-10 22:59:06 | Weebụsaịtị